Ellie Mae's - I-WIFI YAMAHHALA
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDave And Sue
I-WiFi YAMAHHALA-Isitrato esinye ngasemva kwirempu yesikhephe, ipaki yokutyibiliza kunye nebala lokudlala. Imizuzu emi-5 uhambahamba uye kwibala legalufa, i-pub, ivenkile enkulu, iindawo zokutyela kunye ne-foreshore. Indawo yokupaka efihlakeleyo kunye nendawo yokonwabisa ene-BBQ kunye nokusetwa kwetafile yabantu abasi-8. Amagumbi okulala ama-3 abanzi, kubandakanya igumbi lokulala eli-Master eline-ensuite kunye nokuhamba ngengubo. Eli khaya likhanya kwaye liqaqambile linekhitshi elitsha kunye neendawo ezininzi zokuphumla. I-Wifi yasimahla ngoku iyafumaneka kunye neNetflix kunye noStan (ukungena eyakho kuyafuneka)
Igaraji enye yokusetyenziswa ngabanini kuphela.
Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulukazi ene-en-suite yakho, iTV, i-fan yesilingi elawulwa kude kunye nokuhamba ngengubo. Indawo entle yokugcina isuti yakho kwaye uxhome ezinye iimpahla. Kwigumbi lokulala lesibini kukho ibhedi ephindwe kabini kunye nomzila wesitimela ojingayo kunye ne-suit case stand, igumbi lokulala lesithathu lineseti ezimbini zeebhanti enye. Igumbi lokuphumla liya kulungela usapho kwaye lipholile ngokwaneleyo kwisibini. Yonwabela imuvi ekukhethweni kweDVD okanye ungene kwiNetflix okanye uStan ukuze ufumane imiboniso oyithandayo (ukungena kwakho kuyafuneka). Kukho indawo yemidlalo yokucela umngeni omnye komnye okanye kwenye indawo ukuze nihlale nje nifunde incwadi. Ikhitshi elitsha likhanya, liqaqambile kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo, kubandakanya umatshini wekofu, umatshini wokuhlamba izitya kunye ne-oveni ye-mircowave. Sinikezela ngeti, ikofu, iswekile kunye nezinto eziyimfuneko eziquka ityuwa kunye nepepile. Asibalibali abancinci, njengoko kukwakho nesitulo esiphakamileyo, iithoyi zokuhlambela kunye nezinto zokudlala/imidlalo elungele yonke iminyaka. Izibuko ibhedi kunye nebhedi iyafumaneka, masazise nje ukuba ungathanda ukuba ilungiselelwe wena phambi kokuba ufike. I-pergola engaphantsi kwekhava ikhuselwe kakuhle, apho unokupheka isidlo kwi-BBQ ebonelelwayo okanye uhlale kwaye ujabulele iintlanzi zentlanzi kwivenkile yendawo. Paka imoto yakho phantsi kwecarport kwaye ukhuselwe kumnyango ongasemva we-Ellie Mae. Iseti yekhava yeQuilt inokutshintsha kwaye ingafani neefoto njengoko zihlanjwa rhoqo kwaye ukufumana uyilo olufanayo akunakwenzeka.
4.93 · Izimvo eziyi-145
Nandipha ukuzola kwelokishi encinci kwaye unukise umoya wolwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Dave And Sue
Sifowuna kuphela kude. Apha ukunceda
UDave And Sue yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Port Macdonnell